Is Zimbabwe the same as South Africa?
Question: Is Zimbabwe the same as South Africa?
Is South Africa richer than Zimbabwe?
What separates Zimbabwe from SA?
Can I visit Zimbabwe from South Africa?
Zimbabwe is visa-free for South Africans with a valid passport for a stay up to 90 days. Medical requirements: Its highly advised to take anti-malaria tablets and carry mosquito repellents.
Zimbabwe has had a chequered history. By contrast, the GDP of South Africa is $7,508 per capital, (World Bank 2009 – 13) ten times that of Zimbabwe ($714 per capita) and it has the largest economy on the continent.
River Limpopo Beitbridge is a border town in the province of Matabeleland South, Zimbabwe. The name also refers to the border post and bridge spanning the River Limpopo, which forms the political border between South Africa and Zimbabwe.
South Africa is about 3.1 times bigger than Zimbabwe. Zimbabwe is approximately 390,757 sq km, while South Africa is approximately 1,219,090 sq km, making South Africa 212% larger than Zimbabwe. Meanwhile, the population of Zimbabwe is ~14.5 million people (41.9 million more people live in South Africa).